နာမည်ကြီး Instagram အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ငွေရှာနည်းများ အပိုင်း (၂) – Digital Photography Myanmar
HomeInspirationနာမည်ကြီး Instagram အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ ငွေရှာနည်းများ အပိုင်း (၂)
May 20, 2016 Jedi Inspiration 0
ယခင်နေ့မှအဆက်။ ။ ပထမ ပိုင်းကို ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော် ဟေးရက်စ် နဲ့ စကားပြောနေတုန်း လူငယ်တွေက ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ သူ့ကို လာပြီး နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အင်တာဗျူး ပြီးတဲ့အချိန်ကို ဟေးရက်စ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ကားထဲမှာ ထိုင်စောင့်နေကြပါတယ်။ Instagram မှာ လူသိများတဲ့ လူငယ်လေးတွေက အပြင်လောကမှာပါ နာမည်ကြီးလာပါပြီ။
အနေအထိုင်သန့်သန့်ပြန့်တယ်၊ သစ်သီးဖျော်ရည် diet လိုမျိုးတွေလုပ်နေတာကြောင့် အဒီအတွဲက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဟိုးအရင်ဦးဆောင်တွေသူလို့ သူတို့က လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Instagram မှာ စံပြဖြစ်လာပါတယ်။ အကယ်လို့များ ပက်ထရွန် သူတော်စင်တွေသာ လူမှုနက်ဝပ် ကမ္ဘာမှာ ရှိခဲ့ရင် Instagram celebrity စုံတွဲဖြစ်တဲ့ ဂျေး အယ်ဗာရက်ဇ် နဲ့ အလက်စစ် ရန်င် တို့ဖြစ်မှာပါလို့ လေဗတ်ထ်နဲ့ ဟေးရက်စ် တို့က တူတူထောက်ခံပါတယ်။ “သူတို့အတွဲက တကယ့်ကို မိုက်တယ်လေ”
Bahamian plane wrecks
A photo posted by JAY ALVARREZ (@jayalvarrez) on Sep 2, 2015 at 6:35pm PDT
Instagram မှာ လွှမ်းမိုးနေတဲ့ celebrity တွေ (ဥပမာ follower ၅၁ သန်းကျော်ရှိတဲ့ ကင်မ် ကဒတ်ရှ်ရှန် ) လိုမျိုးတွေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း အယ်ဗာရက်ဇ် နဲ့ အလက်စစ် တို့က မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေဖက်က ဆယ်ကျော်သက် စုံတွဲတွေကို ပိုပြီး လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ဒီအတွဲရဲ့ Instagram feed မှာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရွှေညိုရောင် ရှိတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေ၊ အသက်ရှုရပ်လောက်စေတဲ့ စွန့်စွန့်စားစား အားကစားနည်းတွေ၊ သဲမှုန်လေးတွေ တစိတ်တပိုင်း ပေနေတဲ ့တင်သားလှလှတွေ နဲ့ ဘဟားမားကနေ ဘယွန်ဘီ ကမ်းခြေအထိ ခရီးစဉ် စတာတွေ ပြည့်နေတာတွေရမှာပါ။ ကောင်းကင်က အလွတ်လေထီးခုန်တာတွေ၊ တပိုင်းတစ ပေါ်နေတဲ့ ရင်သားတွေ နဲ့အတူ သူတို့ နှစ်ယောက် ချစ်ကြည်နူးနေတဲ့ ပုံတွေက ဆယ်ကျော်သက် စုံတွဲတွေကို အဓိကလွှမ်းမိုးနိုင်တာပါ ပဲ။
တခြားသော Instagram နာမည်ကြီးတွေ ( follower ၁.၄ သန်းကျော်ရှိတဲ့ ဘရောခ် အိုဟာန်း ကနေ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကို အခကြေးငွေယူပြီးတက်တဲ့ follower ၈၃၄၀၀ ရှိတဲ့ ရှာလော့ ဒီ အဲလက်ဆီယို) လိုပါပဲ၊ ဒီ နာမည်ကြီးအတွဲက ဒေါ်လာနည်းနည်းလောက်အတွက်နဲ့ Instagram မှာ တင်တာမျိုးက ရှားပါး ပါတယ်။ အယ်ဗာရက်ဇ်က စွန့်စွန့်စားစားကစားနည်းတွေကို ကစားတဲ့ အားကစားသမား၊ ရန်င် က မော်ဒယ်လ်၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ပေါင်း follower ၆ သန်းကျော်ရှိတာမို့ သူတို့ဟာ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ မေးခွန်းမေးစရာမလိုအောင် ကောင်းမွန်ပြီးပြည့်စုံကြပါတယ်။
Throwback to Tahiti ? the best meal I’ve ever had ?? @jayalvarrez
ဟေးရက်စ်နဲ့ လေဗတ်ထ်တို့ အတွက်တော့ သူတို့စုံတွဲ( အယ်ဗာရက်ဇ် နဲ့ ရန်င်) က အထင်ကြီးအားကျစရာပါ။ ” အလွတ်လေထီးခုန်ကြတာ၊ ရဟတ်ယာဉ်စီးကြတာ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကမ်းခြေတွေကိုသွားတာတွေကို ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ထားကြတယ်လေ၊ တော်တော်လေး လန်းပါတယ်” လို့ လေဗတ်ထ် က အထင်ကြီးတဲ့လေသံနဲ့ ပြောနေပါတယ်။
ဟေးရက်စ်က “သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေကို မနာလိုရုံပါပဲ၊ ကျွန်တော့်မှာ အခွင့်အရေးရှိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”။ အယ်ဗာရက်ဇ် ရဲ့ Instagram လုပ်နည်းအတိုင်း ဓါတ်ပုံတွေ GoPro ဗီဒီယိုတွေ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ခုချိန်ထိကတော့ တစ်ပတ်ကို Adventure ပုံကောင်းနည်းနည်းလောက်ပဲ တင်ဖို့ရည်ရွယ်နေပါတယ်။ “ဂျေး အယ်ဗာရက်ဇ် လုပ်တာကို လိုက်လုပ်ရုံပဲပေါ့” သူက ဟာသလုပ်ပြီးပြောတယ်။
ခဏနေတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆစ်ဒနီ မြောက်ဖက်က ပန်းချီကားဆန်တဲ့ ကျောက်ဆောင်တွေရှိတဲ့နေရာကို သွားကြပါတယ်။ လေဗတ်ထ်နဲ့ ဟေးရက်စ်တို့က ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ လျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုကို သိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ခြံစည်းရိုးကိုကျော်တက်၊ သဲကြမ်းလမ်းတွေအတိုင်းသွားလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သဲကျောက်တုန်းတွေစုနေတဲ့ ကျောက်ပုံတစ်ခုကို တွေ့ပါတယ်။ ဆစ်ဒနီရဲ့ မြို့ပြအလှဟာ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းနဲ့ အလွန်ကို ပဏာရနေပါတယ် ပြီးတော့ လေဗတ်ထ်က ဟေးရက်စစ် ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ရအောင် အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဟန်ပြပေးပါတယ်။
သူတို့တတွေရဲ့ Instagram ဟာ follower တွေအတွက် ရိုးရှင်းပါတယ်လို့ ခံယူထားကြပါတယ်၊ ” ကမ်းခြေယဉ်ကျေးမှု၊ သြစတျေးလျ၊ သြစတျေးလျ နိုင်ငံသား၊ ဒီလိုပဲ အချိန်ကုန်သွားကြတာပဲဗျာ” လို့ ဟေးရက်စ်က ညည်းတယ်။
ကျွန်တော်သူတို့စုံတွဲနဲ့ အတူရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့ ဒီနေ့ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ထားပေမယ့်လဲ Instagram မှာ တင်ဖြစ်ချင်မှတင်ဖြစ်မှာပါ၊ နည်းနည်းလဲ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေတဲ့ ပုံလဲပေါက်နေကြပါတယ်။
ဟေးရက်စ်က အပြန်လမ်းမှာ စကားပြောနေရင်း သူ့ရဲ့Instagram အောင်မြင်မှုအတွက် ဒီလိုကောက်ချက်ချပါတယ်။ ” ခင်ဗျားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ဂုဏ်ပြုခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကလေ အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဗျာ”။